वर्तमान शैक्षिक परिपाटीको शल्यक्रिया | मझेरी डट कम
ks — Sat, 11/24/2012 - 20:14
अर्काले थोपरेको सिद्धान्त वा उपदेशलाई अन्धो भएर खुरुखुरु अनुकरण गर्दा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति भोग्नुपर्छ । हरेक कुरामा आफ्नै दृष्टिकोण व्यक्त गर्न खोज्ने सिर्जनात्मक प्रतिभाको कदर हुनुपर्छ । बाहिरको सूचना र जानकारी लिएर र सिकेर मान्छे बुद्धिजीवि त कहिएला तर बुद्धिमान् भने हुँदैन । अभिभावक र शिक्षकवर्गले भनेका कुरा नै सिक्नु र घोक्नु पर्याप्त छ भनेर बच्चाको मौलिक क्षमतालाई मार्ने काम हामी बौद्धिकवर्गले नै गर्ने हो भने कस्तो समाजको कल्पना गर्न खोजिएको हो ? त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो । तालिम प्राप्त सुगाले जे सिक्यो त्यही भट्याइरहन्छ । त्यसभन्दा बाहिर जाँदैन । हलो जोत्ने गोरुले हलो तान्न जान्दछ तर ठीकबेठीक के हो, छुट्याउन सक्दैन । के हामी मालिकको इसारामा नाच्ने बाँदर, भालुजस्ता जनशक्ति उत्पादन हुन् भन्ने चाहन्छौँ र ? हामी त विवेकले काम गर्ने जनशक्तिको चाहना र कामना गरिरहेका छौँ । यसका लागि हरेक कुरामा हरेक व्यक्तिको आ–आफ्नै दृष्टिकोण हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक मार्गचित्र बमोजिम पढेको र घोकेको शिक्षाले मस्तिष्कको विकास त गर्छ तर हृदयको विकास ठप्प पार्छ । हृदयविनाको मान्छे गुलाम बाहेक अर्थोक बन्न सक्दैन । म जे भन्छु त्यो मान् भन्नुको सट्टा मैले भनेको कुरा मलाई चाहिँ ठीक लागेको छ, तिमीलाई कस्तो लाग्छ भन्दियो भने बच्चामा खोजपूर्ण मन पैदा हुनसक्छ । आफैँले जन्माएका प्रश्नै प्रश्नको घेरामा बच्चा रहने अवस्था आएमा उसमा सत्यको खोज गर्ने चाहना र सामर्थ्य विकसित हुँदै जान्छ । यस खाले वातावरण निर्माणमा हाम्रो भूमिका रहनुपर्छ ।
आजको पुस्ताले खोजेको शैक्षिक परिपाटी शैक्षिक परिपाटी फरक धारमा आधारित छ । आफूभित्र शैक्षिक जागरण ल्याउने सवालमा हिजोको पुस्ताले बाटो बिराएको छ । अतः नयाँ पिँढीका लागि नयाँ शैक्षिक मार्ग तयार गर्नु नितान्त आवश्यक भएको छ जसलाई निम्नानुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
४. प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा– शैक्षिक परिपाटीमा प्रतिस्पर्धाको खेल हुनु विडम्बनापूर्ण छ । ज्ञान हासिल गर्न कसैलाई उछिन्ने मानसिकता ठीक छैन । कसैलाई पछि पारेर आफू अघि बढ्ने शिक्षा विल्कुलै अशोभनीय छ । प्रतिस्पर्धाको शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षाप्रति मनमा वितृष्णा उब्जिए मात्र शैक्षिक क्षेत्रमा नवीन अध्यायको सुरूवात हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट अरूलाई पछारेर आफू अघि बढ्नु लोकप्रियता कमाउनु होइन । बरू अलोकप्रियता आर्जन हुन्छ । के कक्षाका भएका जम्मा पैँतीस जनामध्ये प्रथम भई बाँकी चौँतीस जनाको मन कुल्चँदा उत्तम विद्यार्थी कहलिन सकिन्छ ? मनमा फाटो ल्याउने खालको चुनावी शिक्षा विडम्बनायुक्त छ । आजको पिँढीले कसैको स्तुतिगान गर्नु र कसैको प्रशंसाको भजन गाउनुपरेको छैन । स्तुति र प्रशंसा गरेर अनि प्रतिस्पर्धामा लडेर प्राप्त गरेको विजयको मालाले लाभ हैन जीवनलाई बोझिलो र निरस पार्छ । प्रेमलाई भगाएर, माया र सहानुभूतिको घाँटी दवाएर प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्रको काम छैन । प्रतिस्पर्धा गर्न सिकाएर, अरूजस्तै बन्न लगाएर त आजको पिँढीले आफ्नो हैसियत र दायित्व भुलिरहेको छ । अनि ‘सबै हामी हौँ, हामी नै सबै हौँ’ भन्नुको सट्टा ‘सबै म नै हुँ । म नै हर कुरा हुँ’ भन्दै छ । त्यसैले आजका विद्यार्थीलार्ई प्रेम दिनुपर्छ, चैतन्य औँल्याउनुपर्छ, बाटो देखाउनुपर्छ । तर, जवरजस्ती हिँडाउनुहुन्न । आफ्नै भाका र सुरमा हिँड्न दिनुपर्छ । अघि पुग्न दौडाउनुछैन । पछि पर्छन् कि भनेर ठेल्नु पनि परेको छैन । उनीहरूको लयवद्धतालाई स्खलन गर्नुपरेको छैन ।
६. अहङ्कारपूर्ण शिक्षा– आज लेखपढ गरेका व्यक्तिमै अहङ्कार छ । ठूल्ठूला तहका प्रमाणपत्र बटुल्ने मान्छे नै बढी अहङ्कारी छन् । शैक्षिक जानकारी नै अहङ्कापूर्ण छ । आजको शिक्षाले प्रेम सिकाउँदैन । केवल ईर्ष्यालु विचार र भावनालाई प्रश्रय दिन्छ । अहङ्कार पतनको सङ्केत हो, प्रेमपूर्ण शिक्षा प्रगतिको सम्वाहक हो । अहङ्कारको नशा छुटाएर प्रेम र सहानुभूतिको विजारोपण गर्न शैक्षिक परिपाटीमा आमूल सुधार आवश्यक छ । वास्तवमा शिक्षाले सिकारुमा अहङ्कार जन्माउनुहुन्न, प्रेम रसाउनुपर्छ । अहङ्कारपूर्ण शिक्षाको सट्टामा प्रेमपूर्ण शिक्षा दिनु शिक्षकको दायित्व बन्नुपर्छ । शिक्षक एक प्रकारको प्रेमी बन्नुपर्छ । प्रेमीले नै प्रेम पाउन सक्छ । प्रेम दिन सक्छ । प्रेमले संसार उज्यालो देख्छ । यसो भएमा गन्दे नालीमा देखिएका स्याउँस्याउँती कीराहरूमा पनि अद्भूत आश्चर्य लुकेको भेट्टाउँछ । बग्रेल्ती बच्चाहरू लिएर गन्धे ठाउँ चहार्ने सुँगुर–सुगुर्नीहरूको क्रियाकलापमा पनि अथाह सौन्दर्य फेला पार्न सक्छ । आजका विद्यार्थीले अहङ्कार भित्र्याउने शिक्षा प्राप्त गर्नुभन्दा प्रेम पैदा गर्ने अशिक्षा नै पाउनु वेस हुन्छ । आजसम्मको शिक्षा खरो अनुशासनमा आधारित छ । वस्तुनिष्ठ छ । मेसिनरी छ । त्यसै कारणले आज सबै जसोमा अहङ्कार जन्मिएको छ । चरम असन्तोष पैदा भएको छ । हाम्रो अहङ्कारले भनिरहेको छ– ‘म यत्ति धेरै पढेको मान्छे, अब हलो जोत्न सक्दिनँ । अब घाँस काट्न सक्दिनँ । अब पशुसेवा गरेर दुई पैसा आर्जनमा चित्त बुझाउन सक्दिनँ । सानोतिनो नोकरीमा चित्त बुझाउन सक्दिनँ । अब मैले त ठूलो पदवाला नोकरी पाउनुपर्छ । पशुको नोकर हैन, जनताको पनि होइन अब म सरकारको नोकर हुनुपर्छ । सरकारी नूनको सोझो गर्ने बन्नुपर्छ ।’ यस खाले चिन्तन भित्त्याउने शिक्षा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यस युगले गहन जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा सुम्पेको छ । कताकता कठिन काम खटाएको अनुभव हुन्छ । सहज सम्भव नहुने काम फत्ते गर्नु नै ठूलो सफलता हो । गर्दै जाँदा, भोग्दै जाँदा, उदार दिल र निस्वार्थ सोचले कर्म पथमा डोहोरिँदै जाँदा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन । आजका विद्यार्थीले मेसिन हैन मान्छे बन्नुपर्छ । उनीहरूले दृष्टि र श्रवणयुक्त मनुष्य बन्न पाउनुपर्छ । उनीहरूले स्रष्टा र द्रष्टा दुबै हुन पाउनुपर्छ । घोकन्ते र अनुयायी हैन, विवेकी र चैतन्ययुक्त हुनुपर्छ । उनीहरूले जडबुद्धियुक्त हुनुछैन । आफ्नो जीवनप्रति सन्तुष्ट हुनुपर्छ । प्रेमले खारिएका हुनुपर्छ । उनीहरूले जीवनको अपार आनन्द भोग गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूले भय र त्रास, ईर्ष्या र आडम्बर, अन्धविश्वास र पाखण्डको भेउ छिचोल्नुपर्छ । उनीहरू जे जान्दछन्, जे बुझ्दछन्, त्यो उनीहरूको विवेक र विचारअनुरूप हुनुपर्दछ । उनीहरू अरूले खनेको पथमार्गी बन्दै बन्नुहुन्न । आफू हिँड्ने बाटो आफैँले खन्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ । अरूले खनेको बाटोमा लुरुलुरु हिँड्ने आज्ञाकारी अनुचर बन्नु गलत हुन जान्छ । विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट खाली मन लिएर घर फर्कनहुन्न । खाली मन सैतानको घर हुन्छ । दिनदिनै उनीहरूको मन भरिँदै जानुपर्छ । सिकेका कुरामध्ये चाहिए जति स्मरणमा भण्डारण गर्छन् र नयाँ कुराका लागि ठाउँ खाली गर्न सक्छन् । त्यो खाली पूर्ति गर्ने जिम्मा शिक्षकको हो । झुटो आश्वासन र असम्भव कुराले भर्दिने भुल कदापि गर्नुहुन्न । आजका विद्यार्थीलाई नयाँ मान्छे बनाउनुपर्छ । उनीहरूको चाहनामा कुठाराघात हुनुहुन्न । उनीहरूले भुल्नुहुन्न, उनीहरूले चुक्नुहुन्न । उनीहरू हर्दम होससहितका जोसिला बन्नुपर्छ । उनीहरूले होसलाई नै धर्म र वेहोसीलाई नै पाप ठान्नुपर्छ । समय आउँदा हँसिमजाकले संसार हँसाउन र परिस्थितिले डाक्दा धीरता र शालिनताले खारिएको दुवै व्यक्तित्व देखाउन समेत सक्नुपर्छ । उनीहरू हाँसोमा रोदनको सतर्कता र रोदनमा आनन्दको उत्कट आभाष पहिल्याउने हुनुपर्छ । उनीहरूले महत्वाकाङ्क्षाको महल ठड्याउनुछैन । निस्सारताको पाठ घोक्नुछैन । जीवनवोधको अध्याय पढ्नुपर्छ । जीवनका अध्याय, अध्याय उल्टाउनुपर्छ ।
हाल– श्री लिटिल फ्लावर मा.वि., राजविराज मोडेल क्याम्पस र वल्र्डभिजन क्याम्पस, राजविराजमा शिक्षणरत् ।